Arday ka qalinjabisay macadka O.T.T.I oo shahaadooyin la gudoonsiiyay | Radio Muqdisho
Arday ka qalinjabisay macadka O.T.T.I oo shahaadooyin la gudoonsiiyay
Published on January 31, 2013 by admin · No Comments · 1,405 views
In kabadan 150 arday oo baratay caafimaadka iyo saxaafadda oo ka qalin jabisay macadka O.T.T.I ee magaalada Muqdisho ayaa maanta la gudoonsiiyay shahaadooyin.
Munaasabadda lagu guddoonsiinayay shahaadooyinka arday ka qalin jabisay macadka O.T.T.I oo lagu qabtay xarunta Jaamacadda Salaama University ayna ka qeyb galeen macalimiin, arday, waalidiin iyo marti sharaf kale, waxaana ardaydii shahaadooyinka la guddoonsiiyay ay tiradoodu gaareysay 186 arday.
Agaasimaha macadka O.T.T.I Maxamed Macalim Ibraahim oo hadal ka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in ardayda maanta shahaada la gudoonsiiyay ay barteen maadooyinka caafimaadka iyo saxaafadda ayna baranayeen muddo 9 bilood ah.
Sidoo kale maamulaha Jaamacadda Salaama University Prof Cabdi Aadan oo gaba gabadii munaasabada khubad ka jeediyay ayaa tilmaamay in macadka O.T.T.I ay ka taageeri doonaan hormarinta waxbarashada ardayda dhigata.
Gaba gabadii munaasabada ayaa waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyay ardaydii dhameysatay waxbarashada caafimaadka iyo saxaafadda, waxaana ardaydan maanta la guddoonsiiyay shahaadooyinka ayaa ahayeen dufcadii 43-aad ee ka qalin jabiso macadkaas